Ciidamada AMISOM oo dhaqaale la’aan soo wajahday, qorshaynayana in sanadka 2016 Somalia ka baxaan – idalenews.com
Ciidamada AMISOM oo dhaqaale la’aan soo wajahday, qorshaynayana in sanadka 2016 Somalia ka baxaan
Wasiiradda arrimaha dibada ee Kenya Aamina Maxamed oo ka qaybgashay shirka qaar kamid ah hogaamiyayaasha gobolku ay ku yeesheen dalka Uganda ayaa sheegtay in eedaymaha loo soo jeedinayo dalkeeda oo ah inay ku lug yeesheen siyaasada arrimaha ee gobollada Jubbooyinka in ay tahay mid aan wax u taraynin hannaanka lagu doonayo in Soomaaliya xasiloonida loogu soo celiyo.
Aamina ayaa sheegtay in haatan ay jirto fursad mudan in awoodeena oo dhan aan isugu gayno sidii loo xasilin lahaa Soomaaliya marka la gaaro sannadka 2016.
Iyadoo u warramaysay wakaalada wararka shiinaha ee la yiraahdo Shinwaa (Xinhua) ayay wasiiraddu tilmaantay inaysan jirin wax cabasho ah oo si rasmi ah Soomaaliya ay ugu soo gudbisay Kenya.
“Ma jiraan wax cabasho ah oo si toos ah naloogu soo gudbiyay annaga, waxaase jira dhibaatooyin ay tahay inaan dhammaanteen ka wada shaqayno sidii xal loogu heli lahaa” ayay tiri Aamino.
“Hadii aan dhammaanteen gacmaha isqabsano waxaynu gaaraynaa halka aynu doonayno oo ah ballanqaadkeenii ahaa inaan Soomaaliya kasoo baxno 2016-ka” ayay sii raacisay.
Wasiiradda arrimaha dibadda Kenya ayaa sheegtay in labaatankii sano ee lasoo dhaafay Kenya ay taageeraysay Soomaalida si dalkooda ay u xasiliyaan, u qabatayna shirar kala duwan oo xal loogu raadinayo mushkilada Soomaaliya.
Aamina oo markii ugu horreysay ka dhawaajisay in ciidamada AMISOM ay qorshaynayaan ina ka soo baxaan Soomaaliya 2016-ka ayaa u qabatay dawlada Soomaaliya inay shacabkeeda taageeradooda hesho muddo labo sano ah gudahood, oo ay la heshiiso, lana wareegto maamulka dalka iyo waliba maamulka meelaha ay Kenya haatan ciidamadeedu joogaan.
Haweenayda hormuudka ka ah diblamaasiyada dalka Kenya ayaa ku boorriday dawlada Soomaaliya inay raadsato kalsoonida shacabkeeda si aysan mar walba ula kulmin mucaaradad uga timaada gudaha oo ay dhisto hay’adihii dawlada.
Waxayna ku baaqday in wadamada Afrika ay taageeraan dhaqaalana siiyaan hawlgalka ciidamada AMISOM maadaama bay tiri ay midowga Yurub oo taageerada dhaqaale siin jiray AMISOM laga yaabo inay joojiyaan oo ay soo food saartay dhaqaale xumo.
Waxay Kaloo Aamina sheegtay inay dhibaatooyinka soo wajahay AMISOM aysan ahayn oo kaliya kuwa dhaqaale balse ay haysato ciidamo yaraan keentay in culayso soo fuulo hawlgalkooda.
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa madmadow soo kala dhexgalay kadib markii ay dawlada Soomaaliya ku eedaysay ciidamada Kenya inay ka qaybqaateen dagaalladii ka dhacay Kismaayo, ayna dalbatay in ciidankooda lagu soo badalo ciidamo kale.
Balse arrinkan ayaa xal looga gaaray shirkii ay hogaamiyayaasha gobolku ku yeesheen dalka Uganda kaasoo lagu go’aamiyay in Dowladda Soomaaliya lagu wareejiyo Dekada iyo gagida caalamiga ah ee magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose, iyadoo sidoo kalana meesha laga saaray dalab ay markii hore Soomaaliya ku doonaysay in ciidanka Kenya laga saaro magaalada Kismaayo, sida ay tabiyeen qaar kamid ah warbaahinta dalka Kenya.
War murtiyeedka Kampala oo u’eg War-murtiyeedkii IGAD ee fashilmey ee ahaa “Dowlada Somalia ha looga dambeeyo Maamul u sameynta dalka”
Daawo Goolashii ugu quruxda badnaa ee uu dhaliyey Cayaaryahanka Luis Suarez